သုံးလကို ရွှေအောင်စ ငါးသောင်းထုတ်ရမယ်။ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » သုံးလကို ရွှေအောင်စ ငါးသောင်းထုတ်ရမယ်။	10
Posted by phone_kyaw on Jul 12, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
စကားမစပ်…..မြန်မာအစိုးရက လိမ်လည်စားတဲ့လူတွေကြတော့ ဗီဇာပေးတယ်။ ကျနော့်လို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားတဲ့လူတွေကျတော့ တွန့် တိုနေတယ်။ ငါ-ိုးမသားအစိုးရ။
Phone Kyaw has written 156 post in this blog.
ဘုန်းကျော်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံတွင်နေသည်။ ၁၉၇၉-ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့ တွင်မွေးပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိ စစ်တပ်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အဖေဖြစ်သူသည် တကြပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကျော်တောခိုခဲ့သည်။ နယ်စပ်ကလူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းသည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းတခုမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားတဦးလည်းဖြစ်သည်။ ခလေးသုံးယောက်ရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်သော်လည်း စော်ချောချောမြင်လျှင် ငန်းတက်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည် မွန် လူမျိုးဖြစ်သည်။ ဘုန်းကျော်သည်လည်း ပအိုဝ် တပိုင်း ဗမာတပိုင်းဖြစ်သည်။ အဖေသည် သာယာဝတီနယ်သားဖြစ်၍ အမေသည် သထုံနယ်သူဖြစ်ကြောင်း။ ဘုန်းကျော်ရေးသည့်စာများအား လုံးဝတာဝန်ယူသည်။
ဆက်သွယ်ရန်...wgdperth@gmail.com Phone.Kyaw@goldfields.com.au www.phonekyaw.blogspot.com မကြိုက်ရင်လုံးဝလာပြီးမဖတ်နဲ့ ။
View all posts by phone_kyaw →	Blog
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ကိုယ်တူးတဲ့နေရာမှာ ရွှေမှမရှိတာကိုရွှေဘဲအတင်းထွက်ခိုင်းနေတယ်
ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ကျုပ်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကို ဆဲရေးတိုင်းထွားနေရတာလည်း
သြစတေးလျှနိုင်ငံသားတစ်ယောက်က ကျုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကို ဆဲရေးတိုင်းထွာတာကို
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3124
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဒါနဲ့စကားမစပ် အဲ့သည်အာဖရိကမှနေတဲ့ စီအီးအို ဆိုတာ
လူလား ဘာလား ကျားလား မလား
မောင်ပေ says: ခေတ်ကောင်းလို့ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ ပြန်လာရင်
လေဆိပ်ကအထွက် ကားပြာတန်းစီးရမှာ သေချာပါတယ်
Phaung Phaung says: အမ်… ဘာဖြစ်လို့ဆဲတာလဲ.. မသိလို့ပါ… ကိုဖုန်းကျော်ကြီးကမြန်မာပြည်ကို ပြန်လာချင်တာလား…
ဘာကြောင့် ဗီဇာမပေးတာလည်းဆိုတာ ရှင်းပါဦး … နားမလည်လို့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 674
laypai says: လူတွေ တန်ဖိုးထားသည့်
အိမ်မှာ လာ ကြည့်
မူးလို့ ရှူစရာ မရှိ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8453
kai says: …ခုလက်ရှိအစိုးရနဲ့.. အေဘီနဲ့ညှိပြီးမှ… အေဘီတပ်မတော်သားဟောင်း/လက်ရှိတွေ ပြည်တော်ပြန်ကိစ္စ.. စဉ်းစားမယ်လို့ထင်တယ်.
လောလောဆယ်တော့.. သမ္မတအကြံပေးထဲ.. ကျောင်းသားတပ်မတော်သားဟောင်းတယောက်.. ပါနေတာတွေ့တယ်..
ဒီကိစ္စတွေအတွက်.. သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်..။
ပြော၇ရင်.. အေဘီတပ်မတော်ထဲကသူတွေကို.. ယူအက်စ်ကလည်း.. နိုင်ငံသား/အစိမ်းကဒ်မပေးပဲ.. အကြာကြီး. ပိတ်ထားဖူးတယ်လေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7074
etone says: ကိုဘုန်းကျော်ရယ် …
ကြားရတာနဲ့တင် သွားရေကျစရာကြီး …. ရွှေအောင်စ ငါးသောင်းဆိုလို့ပါ ….. ။
သဘာဝက ရတဲ့ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေက တားဂတ်ထားပြီး ဘယ်လောက်ထုတ်ပါ ၊ ဘယ်လောက်ထွက်ရမယ်လို့ လုပ်လို့ ရရိုးလားတော် … ။ ဗီဆာလိုချင်လျှင် … အထုတ်လိုက် အထည်လိုက် လှူမယ်လို့ အော်ပြီးသာ ၀င်လာလိုက် … ၊ ဟို အဖွဲ့စည်းအချို့လိုပေါ့ … အဟိဟိ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1074
Wow says: ဒဂျီးက ဘုန်းကျော်ကို ဖြောင်းဖြဖို့ Never give up! ပဲနော်…. ဟီး….
ဒဂျီးနဲ့ ဘုန်းကျော်က ၀ုတ်ထုရေးဖို့ဆို Character တအားမှန်တဲ့ ဇတ်ကောင်တွေလိုပဲ။ ပေးရေးမှာလား… ခွင့်တောင်းတယ်နော်… လူဂျီးဒွေ….
P chogyi says: အကောင်းပြော(ရေး)နေရင်းက
တား တား ကြောက်သွားပြီ
လူ ဟား says: ပြန်လာချင်တာလား…. အလွယ်လေး… ထွက်သွားတုန်းက ဘယ်ကနေ ထွက်လဲ.. အဲဒီကနေ ပြန်ဝင်..မှတ်ပုံတင် အသစ်ပြန်လုပ်…နှုတ်ကို စောင့်စည်း… အေးဆေး ကလေးမွေးပေါ့…